Iyo iPad Mhedzisiro | Martech Zone
Iyo IPad Mhedzisiro
Svondo, July 1, 2012 Svondo, Gunyana 8, 2013 Douglas Karr
Pane chimwe chiri kuitika nenzira yandave ndichitaurirana nayo online. Semunhu anofarira kuverenga uye anogara pamberi pechidzitiro kanokwana maawa masere pazuva, ndiri kuona kuti maitiro angu achinja zvakanyanya pamusoro pegore rapfuura. Ndaiwanzo kuunza laptop yangu kwese kwese neni… izvozvi handidi. Kana ndiri kushanda, ndinogona kunge ndiri kuhofisi yangu pachiratidziri hombe kana pamba pachiratidziri hombe. Kana ndiri kutarisa email kana kumhanya, ini ndinowanzo kuve pane yangu iPhone.
Asi apo ini ndiri kuverenga, kutenga pamhepo uye kutsvagisa, ndiri kuzviwana ndiri kusvika kune yangu iPad mukana wese wandinowana.
Pandinomuka, ndinoibata kuti ndiverenge nhau. Pandinenge ndichiona firimu kana terevhizheni, ndinoitora kuti ndione zvinhu kumusoro. Pandinogara pasi kuti ndiverenge uye ndizorore, ndinogara ndiinazvo. Pandinenge ndichifunga nezve kutenga chimwe chinhu, ndiri kuchishandisa zvakare. Kana iwe usingafunge kuti izvi zvinoshamisa… ndizvozvo zvangu. Ndiri bhuku rekubvuta. Ndinoda kunzwa uye kunhuwidza kwebhuku rakakura… asi ndiri kuzviwana ndiri kunhonga zvishoma. Ini zvino ndotenga mabhuku pane iyo iPad uye ndinonyorera kumagazini futi.
Uye ini ndinoda hombe screen - yakakura iri nani. Asi sezvo ini ndiri kuverenga, iyo hombe skrini yakawandisa. Mahwindo akawandisa, zviyeuchidzo zvakawandisa, mifananidzo yakawandisa… zvinokanganisa zvakawanda. Iyo iPad haina izvo zvinokanganisa. Iyo yemunhu, yakasununguka, uye ine inoshamisa kuratidza. Uye ini ndinonyanya kuda kana nzvimbo dzepamhepo dziri kutora mukana wekubatana kwetafura sekutsvaira. Ndinozviona ndichipedza nguva yakawanda pane yavo saiti uye ndichitaurirana zvakadzama.
Zvinotoshamisa kuti ini handifarire kusangana pasocial network pahwendefa. Chishandiso cheFacebook chakayamwa… ingori vhezheni yakachinjika, uye inononoka yeiyo online saum. Twitter inotonhorera, asi ini ndinowanzo ingovhura sezvo ini ndichigovana zviwanikwa zvandiri kuita, kwete kudyidzana nenharaunda.
Ini ndinounza izvi mublog blog nekuti ini handigone kuve ndega. Mukutaura nemutengi wedu, Zmags, uyo ane hunyanzvi mukukudziridza runako Kuwirirana kwePadad ne yavo yekushambadzira yedhijitari papuratifomu, vanosimbisa kuti handisini ndega. Kana ruzivo rwakagadzirirwa chigadzirwa, vashandisi vanopindirana zvakadzama nemasaiti kana mashandiro avanobata nawo.
Izvo hazvina kukwana kuti vashambadzi vangoita iyo inoteerera saiti iyo inoshanda pane iyo iPad. Ivo chaizvo vanongoshandisa chishandiso pavanogadzirisa chiitiko. Zviitiko zvePadad zviri kutora huwandu hukuru hwevashanyi, kudyidzana kwakawanda nevashanyi ivavo, uye shanduko dzakakwirira nevashanyi ivavo.
Pano paMartech, tinoshandisa Onswipe kusimudzira ruzivo… asi ine zviyero (sekuyedza kuona infographic uye kuwedzera saizi yayo). Tinotarisira kutanga chishandiso chePadad pachinzvimbo chekuti tikwanise kushandisa zvakazara svikiro. Iwe unofanirwa kufunga nezvekuita zvakafanana.
Tags: iPadipad maitiroipad yekutenga maitiropiritsi
SmartPhones uye Coupons Anoshanda
Seta Maprofiles Ako Mahara: Bvisa Yako Twitter Akaundi
Sep 17, 2012 pa 3: 55 AM
ini ndinogona kupfuudza iyi nyaya mune yangu yekuziva seGirazi tebhu mhedzisiro .. zvakafanana .. shandisa ~ maawa gumi pazuva kubva maawa mashanu kunze kwehofisi ari paTab, nhau, mabhuku, mitambo, mameseji, maemail uye zvishoma zvemagariro [zvimwe kuburikidza ne hootsuite uye flipboard]
Nov 9, 2012 pa4: 26AM
Errmmmm, uye ndosaka ndichiona zvisina musoro vanhu pavanodzinga
Mahwendefa eApple e "kushomeka kwemaapps". Zvese zvaakataura zvinoitwa
pamwe zvinobudirira pane imwe.
Sep 17, 2012 na12: 33 PM
Hwendefa chishandiso chinogona kushandiswa nemwana ane makore matatu ekuberekwa kune munhu ane makore makumi matanhatu nenatanhatu Saka ndinotenda chinowira mune chero chikamu kwete chete kune yakatarwa chikamu chevanhu Asi chichaita kukura kukuru kune Bhizinesi nyanzvi sezvavanoda maoko ASAP…
Mbudzi 19, 2012 na3: 49 PM
Kunze kwezvaunotaura, yangu iPad ndiyo yangu yekushandisa yekushandisa kana ndiri kudya mangwanani pahotera 🙂 Can; t ita ndisina izvozvo!
Mbudzi 19, 2012 na4: 08 PM
Yangu futi, MissFrenchy!